Bakhale ngokungahleleki abebezofesa | Isolezwe
Bakhale ngokungahleleki abebezofesa
Isolezwe / 28 December 2012, 2:24pm / NONTUTHUKO NGUBANE
KUCISHE kwaphuma isidumbu abantu abangu-15 000 abavela ezindaweni ezahlukene kulesi sifundazwe befesela umsebenzi wamaphoyisa omgqwaqo enkundleni yezemidlalo yaseMgungundlovu, iHarry Gwala, izolo.
Kushube isimo kwabosizo lokuqala kuhayiza abantu, bequleka abanye belahlekelwa yingqondo ngenxa yokugijima ibanga elingu-4km, bephuthuma ukuyoqashwa njengoba bekukhishwe isimemezelo sokuthi kufuneka abantu abangu-90 abazokwenza lo msebenzi.
Kuvele obala isimo sokushoda kwemisebenzi kuleli njengoba bengaphezulu kuka-90 000 abebefake izicelo kulo msebenzi okhishwe nguMnyango wezokuThutha.
Kulabo kuphumelele abangu-32 000 kuphela, abahlukaniswe phakathi ezinsukwini ezimbili ukuze bahlolwe.
Bekungahambeki eduze kwale nkundla obekufeselwa kuyo ngenxa yezimoto ezivela ezindaweni ezahlukene ngisho naseGoli imbala ebezilethe izihlobo ebezibiziwe.
Abebezofesa bakhale ngokungahleleki kwale nhlolokhono njengoba ilanga belikhipha umkhovu etsheni kodwa benganikezwa ngisho amanzi endleleni.
UNksz Nosipho Duma (31) waseXobho, uthe ugcine esehlala phansi endleleni ngenxa yokuphelelwa amandla nabosizo lokuqala bengabonwa.
“Amanzi okuphuza awekho, ngisho noma uphelelwa amandla akekho okusizayo ngoba wonke umuntu ufuna ukufika ngesikhathi esibekiwe. Impilo yethu ibisengozini kakhulu ngoba ungafa endleleni unganakwa muntu. Impela isidumbu sizophuma lana,” kusho uNksz Duma.
Abanye bakhale ngokuzunywa njengoba bethole ama-sms ababizela kulokhu kuhlolwa ngosuku lukaKhisimusi.
Isolezwe lizibonele abantu abebethwelwe belethwa kwabosizo lokuqala, ngenxa yokushoda kwabo bese kungenelele nabanye abebezofesa abanolwazi ngokwelapha.
Kuze kwalethwa enye imoto yosizo lokuqala ngo-10.30 sekubonakala isimo sesonakala.
Amaphoyisa obekumele abheke abagijimayo agcine esebamba abavukwe ukusangana khona lapho beshaya abantu abanye befuna ngisho ukukhumula izimpahla zabo.
Omunye ongathandanga ukudalulwa igama, uthe uyabona balethwe kule ‘nhlolokhono’ ukuzobulawa.
“Kumele umuntu aze afe ukuze uhulumeni abone ukuthi umsebenzi siyawufuna kodwa asiwutholi. Kubuhlungu ngempela ukuthi singalethwa lana sisuka kude kodwa bebebefuna abantu abangu-90 kuphela,” kusho yena.
Okhulumela uMnyango wezokuThutha uMnuz Kwanele Ncalane uvumile ukuthi uma abantu abaningi behlangene ndawonye kuba khona izinkinga kodwa babahlelele ngendlela abantu abebebiziwe.
“Ziba khona izinkinga lapha nalaphaya, uthole abantu sebequleka kodwa njengoMnyango sibalethile abezimo eziphuthumayo. Abantu bebazisiwe ukuthi bazodingeka ukuba bahlolwe isimo semizimba. Into esiyifunayo ukuba ekugcineni abantu abangu-90 abazogcine bathathiwe kube ngabantu abafanele,” kusho uNcalane.
Namuhla kulindeleke abanye abantu abangaphezu kuka-15 000 ukuba nabo behlolwe.
Abadlulele esigabeni esilandelayo bazobuya kusasa ukuzohlolwa okunye.
Ngokusho kukaNcalane iseyinde indlela ekumele beyihambe abafake izicelo njengoba besazoyohlolelwa ukushayela, babhale isivivinyo esihlola ulwazi abanalo bese beyohlohlwa ngemibuzo.